Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q17aad | Warsugan News
Home Maqaalo Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q17aad
Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q17aad
Dec 30, 2015Maqaalo
Safarkii iyo ambo-bixii reerka ku soo noqo. Hadda Abaadir ayaa inoo weli gadh-wadeen inoo ah, waxaanu yidhi:
“Muragada iyo maroora-dillaacu iyada oo uu aad noogu badan yahay, qofna aanu qofka kale la hadlayn ayaanu fuullay. Gaadhigii 9kii aroornimo ee 26/6/1986kii ayaanu ka baxnay. Waxaanu ka koobnayn afar qof oo kala ahaa: aniga, walalo Rooda oo afar gu’ iga weyn, aabbo iyo hooyo.
Aroortaas oo ahayd markii aanau ka baxnay dalka, gaadhi Land-rover ahaa ooGuulwadayaashu lahaayeen ayuu na siiyay Maxamad Faarax Nuur oo aanu gacal ahayn, ka-sokow tolnimada guud. Laba askarina dusha ayuu noo saaray, waxaanu ku yidhi: ‘Reerkaa lama baadhi karo kaantaroolna lama joojin karo askariga taa-taabta soddonkaba ku tiriya. Sidaasna askartii ayuu kula dardaarmay.”
Gebegebadii sheekada, Abaadir sidan ayuu ku soo gunaanaday sheekadiisii xadantada iyo xaradhaamadaba lahayd, waxaanu yidhi:
“Gaadhigii, si nabad ah ayuu nagu geeyay Geed-ballaadh, halkaas oo maalin ka-dib aanu hore uga sii dhaqaaqnay. Waxaanu bil ku nagaannay Calool-la’ Geed-ballaadh ayay 4km ka xigtaa koonfur oo ah meel aanu degno beerana aanu ku leenahay. Waxaanu halkaa ugu tagnay walaashay Canab Ibraahin iyo walaalkay Aw Maxamed Ibraahin oo iyagu halkaaba deggenaa. Aabbo, wuxu u sii kicitimay xaggaa iyo Durya oo bishaaba uu ku maqnaa; waxaanu halkaa kula kulmay madaxdii SNM-ta oo uu ka mid ahaa Raage-bidaar oo ay Bashiir si gaar ah u wada shaqayn jireen ahaana ninka noogu soo dhaweynta badnaa. Guri weyn ayaa halkaa uu nooga dhisay, sidaas ayaanu markii danbe ugu wareegnay xarunta SNM ee durya.
Waxaan hore ka galay tababar ciidan badan oo iga horreeyay halkaa uga socday, aniga oo ah qof naafo ah maan geli karayn tababarka orodka iyo is-baacsiga bal se waxaan aad u bartay miinada noocyadeeda kala duwan, saabunaytida oo inta la ceejiyo nambar badan la iskugu geyn karo hal mel ah, caagad biyood shan litir ah lagu shubi karo amaba ka weyn baabi’in karaysana dhul baaxad leh iyo xasuusta baraarujinta xafladdii dayacnayd ee walbahaarku ku dhaliyay aabbahay.“
Haatan iyo dan
Malqaacad wax ka yar ayaan idiin ka daray bad-weyntii halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd. Intaas oo ma-hadho oo kale oo aan cidna u qornayn cidna u diiwaan-gashanayn oo mudan in bogagga taariikhda ma-guurtada ah lagu xardho ayaa yaal oo meel walba daadsan oo weliba dadkii xusuusta ku hayay sii gurmayaan oo sii galbanayaan.
Waxaan si kooban oo guud-mar iyo sar-ka-xaadisba ah idiin ku soo mariyay sheekadii xadantada iyo xaradhaamada lahayd ee Mujaahid Bashiir, saamayntii ay qoyskooda ku yeelatay iyo Mujaahidiintii ay wada hawl-geli jireen in ka mid ah oo ay sheekadu ila martay. Dhiilladaa aan idiin mariyay iyo kuwo kale oo ka daran oo aanay cidina weli daaha ka feydini, ummaddan meelna uguma qorna.
Waxa laga yaabaa in ay qaar idin ka mid ahi u haysteenba in aanay run ahayn waxan ay akhriyayaan, bal se uba haysteen in ay filim khayaaliya daawanayeen. Waa bogaag kooban oo ka mid ah taariikhdii xanuunka badnayn ee ina soo martay.
Duruusta aynu ka baran karaynaa saddarradan kooban ee aynu akhriyaynay waxa weeyaan wixii dhiillo iyo dhibaato shacbigan Somaliland loo geystay iyo sidii ay uga gilgisheen innaga oo tusaale nool u soo qaadannay Mujaahid Bashiir iyo muddadii labada sannadood ahayd ee uu ku hawlana halgankii hubeysnaa.
Maansadii Hadraawi ee Jiitama ayaa waxa ku jiray:
“Hadda shalay ma dheerayn,
Waxa dhacay ma fududayn,”
Raadkii ayaa weli qoyan iyo saymihii la soo maray ee dagaalladii dibuxoreynta qaran iyo kuwii sokeeye. Innaga oo intaas oo dhib ah ka soo marnay, ayaa raadkii oo qoyan, dhiiggii oo aan weli engegin loo taag la’ yahay is-bahaysi xaaran ah oo dhex-maray ganacsato bahalowday oo ku mamtay hantida ummadda iyo xukuumad iimaanka beeshay oo hantidii qaran hadba qayb iibinaysa. Dadku se waa kii. Waa kii gobannimada dhacsaday ee ku dagaallamay. Maantana dhacsiga qarannimada iyo badbaadinta qarankan lagu soo qudh-baxay uma baahna dagaal loo galo ee cod iyo doorasho ayuu xaalkuba taagan yahay.
Waa sidii Cabdillaahi Suldaan u yidhi oo:
“Danbarkeedi Maandeeq nimaan doonin baa dhamay,”
Previous PostMarwada Koowaad ee Qaranka Somaliland Marwo Aamina Sheekh Maxamed Jirde ayaa Gobolkii Saddexaad gaadhsiisay Deeq Caafimaad, Dhagax-dhig, Kormeer guud iyo Xadhig ka jaridna ka fulisay Gudaha Magaalada Boorama Next PostXisbiga Waddani oo Warsaxaafadeed ka soo saaray Qodobo ay Asxaabta iyO komishanku isla Meel dhigeen